Munamato wekuti ex wangu adzoke. ? Dzoka neni uye Dzoreredza Partner
Munamato wekuti wangu ex adzokere Kunogona kuve iko chete kuponeswa panguva idzodzo uko kushamwaridzana kwerudo.
Tinogona kudzosa munhu iyeye kwatiri munguva diki pane zvinotarisirwa uye zvese nekungotaura munamato uyo kune vakawanda unoratidzika kunge wakapusa asi une simba kwazvo.
Nemunamato uyu tinokwanisa kuwana watakafambidzana naye kuti azive zvikanganiso zvaakaita uye kuti adzoke achidemba nemoyo wekuda kambani yedu uye ndipo patinozoona simba uye kushanda yeminamato yakagadzirwa kubva pakuda kwemweya.
1 Munamato wekuti wangu ex adzokere
2 Munamato wekuti ex wangu adzoke neni
3 Simba munamato kuti udzore mumwe wako
4 Namata kuti ndiponese murume wangu
5 Ndirini pandinogona kunyengeterera munamato wekuti wangu ex adzoke?
Uyu ndiwo mumwe wemibvunzo inobvunzwa nevaverengi vedu.
Unogona kuva nechokwadi chekuti munyengetero une simba.
Isu tinokuratidzai kunyange zvitatu nekuda kwezvakasiyana. Vese vakaedzwa nemazana evanhu.
Ivo vanoshanda nenzira yakapusa, inokurumidza uye inoshanda kwazvo. Ingonamata uine kutenda uye tenda kuti unomhanya chaizvo.
Munamato wekuti ex wangu adzoke neni
Kuti anodzoka Nemasimba eSAN CIPRIANO uye matatu maLIMLS anotarisisa SAN CIPRIANO, CJCG ichauya shure kwangu.
MVBO achauya achikamba Uye, murudo, uzere nerudo, shungu yekudzoka uye kukumbira ruregerero nekureva nhema uye kundibvunza mune kufambidzana uye gare gare mumuchato nekukurumidza sezvinobvira.
SAN CIPRIANO, ini ndichave nesimba iro rinokanganwa uye kamwe chete rinosiya chero mukadzi angave ari mumusoro wake uye anodzoka kuzotora ini uye kuzivisa iye kuti vese vaone.
SAN CIPRIANO kure neCJCG chero mukadzi, kuti anonditsvaga nguva dzese, TODAY uye NZVO, achishuva kuva padivi rangu, kuti ane CERTAINTY YEKUTI NDIRI MUKADZI ANOGONA KUNA Iye, kuti CJCG haigoni kurarama isina ini uye iyo CJCG Iva nemufananidzo wangu mune zvaunofunga nguva dzese.
Izvozvi, NECHEMAI, CHETE IZVI, ACHATADAI KWAZVI NEZVINHU ZVINHU ZVIRI MUKATI AIVA MANDINI.
Uye panguva yekurara iwe unondirota uye kana wamuka iwe unofunga nezvangu uye unondida, kana iwe uchidya unofunga nezvangu, kana iwe uchisvika pandiri, funga nezvangu, MUZVINHU ZVESE ZVENYAYA DZENYAYA YAKO ZVINONYANYA KUTI Ufunge nezvangu.
Izvo zvinoda kundiona, kunzwa kunhuhwirira kwangu, kundibata neRUDO, iyo CJCG inoda kundimbundira, kunditsvoda, kunditarisira, kundichengetedza, kundida maawa makumi maviri nemasere pazuva, ndichiita saizvozvo, kuti anondida zvakanyanya zuva rega uye kuti anonzwa kufara kungonzwa izwi rangu
SAN CIPRIANO itai kuti CJCG inzwire ini chishuwo chisingaenzaniswi, sezvo iye asina kumbonzwirawo mumwe uye haazombofi akanzwa
There there only there that only with only with that
Ndinokutendai SAN CIPRIANO nekushanda mushe yangu uye ndichaverenga IZita renyu mubhadharo wakaremara CJCG uye ndichiuya nerudo, rudo, akazvipira, akazvipira, akatendeka uye azere nechishuwo mumaoko angu.
Kudzosa rudo rwedu, rudo rwedu uye kundiroora ndakapfupika sezvinobvira.
Ini ndinokumbira kuti kune masimba evatema vatatu maLLLS avo vanoona IS CIPRIANO. Ameni
Munamato uyu wekuti ex wangu adzoke neni ane simba rakakura.
Munguva dzekuva nedambudziko nemumwe wedu, isu hatimbofunga kuti iyi ichave yekupedzisira kurwa, kuti mushure mechinguva iyoyo hupenyu hwedu huchachinja nekuti mumwe munhu afunga kutisiya sekunge hapana.
Chinhu ndechekuti munguva idzodzo dzekutsamwisa kwakanyanya kazhinji hatifunge zvatinotaura uye tinozviwana isu taita zvikanganiso zvakawanda, izvo zvinogona kukonzeresa hukama.
Nekudaro, maitiro aya anogona kutibatsira kuziva izvo zvatakatadza uye sekukumbira kwedu kuti iye ex-mumwe wake adzoke kuukama, chakakosha ndechekuzviita nekujekesa zvese uye mukuti munamato uyu unogona kutibatsirawo.
Simba munamato kuti udzore mumwe wako
“Mutsvene Helena, mambokadzi wangu anodikanwa, iwe wakasangana nematambudziko maakatambura nezvipikiri zvitatu, wauya nezvipikiri zvitatu, mumwe wemwanakomana wako Constantine, mumwe wakamuunza kubva kumvura yegungwa, kuti upe hutano nekuchengetedza kune vafambisi vengarava, ikozvino iwe Ini ndinokumbira kuti uyu wechitatu andipe icho, kuti ndiise icho mumoyo uye mupfungwa (iye munhu waunoda), kuti arege kuva nerunyararo mumoyo make.
Ndinokupai muviri wangu nemweya, (zita remunhu) Huya kwandiri pasina chero chinhu chingatiparadzanise, pasina zvipinganidzo, kuti unondida mumuviri, mumweya, kuti ini ndichadzoka ndakanyadziswa, kuti ini ndichawira patsoka dzangu, kuti ini ndichakumbira mukana wekuve neni, Saint Elena ndibatsire.
Saint Elena, dai mwenje wako uve iye unonditungamira murima iri rinotyisa randinonzwa, kuti zuva rega rega uve iwe unondiperekedza, anouya murudo sepakutanga paakandiona, ndinoreurura kwauri Saint Elena Urwu rudo, sembwa.
Nemunamato uyu une simba ndinoda kuti ndiwane rudo rwemunhu iyeye, anondida, kuti adzokere kwandiri, musande ane simba, ndinokukumbira kuti uone matiri mufananidzo werudo rwako, isa rudo urwu pamberi pangu munzira yedu zvakare.
Iye zvino Santa mudiwa ndinokuvimbisa kuti kana iwe ukariunza parutivi rwangu, ndinomira (chimwe chinhu chaunoda chaizvo) kwevhiki, kuti iwe uone kuti rudo rwandinonzwa rwasimba, kuti vice, ndakavimba newe Santa Elena, ndakavimba iwe zvechokwadi uye nemoyo wangu, ndakavimba iwe mambokadzi worudo, ndakavimba iwe mudikani murudo rwedu. ”
Namata munamato kuti udzore mumwe wako nekutenda kwakawanda.
Kuchinjisa wawakaroora naye zvakapfuura nekukukumbira iwe kuti uuye kumba, ndezve kupora mupfungwa dzese dzezwi. Dai rudo rwakafa ngaruve nekuzvarwa rakatosimba kupfuura zvaraive narwo.
Hatigone kuita munamato uyu kubva kuudyire, kubva mukuda kwedu kuzvimanikidza pane mumwe munhu kuti aite zvatinoda chero nemutengo.
Izvi ndizvo munamato unofanirwa kuitwa nemoyo muruoko, tanga taziva izvo isu pachedu isu zvataita zvisizvo uye nemoyo wese wekuda kukumbira ruregerero nekuvakazve hukama tine chokwadi chekuti mumwe wacho anonzwawo kana ari kuda kuitawo izvozvo.
Namata kuti ndiponese murume wangu
Ah Saint Elena yemuchinjiko, usakanganwe ini, wangu Musande, une simba murudo, ini ndinouya kwauri kuzokuudza, kukumbira uye kukumbira iwe, sezvo uchifanira kuziva kuti (zita remunhu) akasiya imba nekuti Mumwe mukadzi, uya nazvo kwandiri zvakare.
Saint Elena, ndiitei kuti ndifunge nezve kukuvara kwakonzera kuti ndiende nemumwe mukadzi, ini ndinofunga ichi chinhu, ane icho chishuwo, ndinomuda kubva pamoyo wangu, anoita kuti adzoke munguva pfupi, achamukweva kwandiri, Ndikanganwe, chero zvandinoita, usamborega kufunga nezvangu.
Saint Elena wemuchinjiko, rudo rwandinonzwa kumurume iyeye rwakanyanya, ndakamupa hujaya hwangu, makore akanakisisa ehupenyu hwangu, ndiri mai vevana vake, kurwadziwa nekusuwa kwandinako kwakanyanya, anongoenda kuti ndizorodze pandinosvika segwayana nyoro uye ndichibvunza rudo rwangu.
Ndinovimba munamato we ex wangu nemurume wangu kuti udzoke mabasa.
Kuroorana kuzvipira kunofungidzirwa pakati pevanhu vaviri kusvika rufu Vaparadzanise, asi iyo yekupedzisira kazhinji haina kuzadzikiswa nekuti chero nguva iyo hukama hunogona kudzikira zvichikonzera kuparara kwehukama uye gare gare kurambana.
Iri idambudziko rave richikura munharaunda uye kunyangwe mumuchato vatendi.
Mune zviitiko izvi munamato uyu unogona kubatsira chaizvo nekuti unotibvumidza kupora mukadzi iyeyekana kuti haudi kuenderera nehukama.
Mune nzanga iri kudzidzisa kuti zvisina basa zvinoraswa, zvine simba kuve nechishandiso kuitira kuti tigone kuchengetedza muchato nenzira ine hutano uye muhutano hwenyama newemweya.
Ndirini pandinogona kunyengeterera munamato wekuti wangu ex adzoke?
Munamato uyu unogona kunamatwa chero iwe paunoda.
Iyo haina nguva yezuva kana nguva yevhiki.
Chinhu chakakosha kunamatira munamato kuti wangu anodzoka aine kutenda kwakawanda uye atende kuti zvese zviri kufamba zvakanaka.
Munamato wakasimba kuna Santa Muerte kuitira kuti mudiwa adzoke
Simba remunamato rekubvisa ziso rakaipa
Munamato wekuda kundifonera nhasi